Umlando Wokuqanjwa Kwendawo yaseMshayazafe, eNanda – The Ulwazi Programme
EMshayazafe indawo yaseNanda eseduze nasoHlange. Igama lalendawo laqanjwa ngezikhathi zobandlululo, ngezikhathi eNanda kusahlala amaNdiya eduze nabantu abamnyama. AmaNdiya asuka kulendawo ngezikhathi zezimpi futhi nobugebengu bubuningi kakhulu. Kuthiwa indlela ubugebengu obabande ngayo kulendawo kwasekuholela ekutheni nezigebengu zangaphandle kwendawo zithole indawo yokugila imikhuba yazo. Ngenxa yalokhu umphakathi wahlangana waxoxisana ngobugebengu nekwakufanele bakwenze. Umphakathi wavumelana ngokuthi kufanele kukhethwe ikomidi elizobheka ubugebengu endaweni elalizokwakhiwa ngamalunga endawo kuphela. Abantu emphakathini kwakufanele babike kulona lelikomidi ngezenzo zobugebengu. Kwakuthi uma kunezehlakalo zobugebengu kwakuwumsebenzi wekomidi ukufuna noma ukubheka labo ababandakanyeka ebugebengwini. Uma umuntu esetholiwe uzobuzwa bese ejeziswa ngokushawa. Amaphoyisa angalesosikhathi ayazi ngamakomidi futhi ebona kuwumsebenzi omuhle owawenziwa yilelikomidi.
Izigigaba eziningi zobugebengu kwakungezokugqekeza. Lowo obanjiwe wayephoqwa ukuthi akhombe umuzi noma umuntu amdayisele izimpahla zokwebiwa zilandwe naye lowo othengile uzothola isijezo esimfanele ngokuthenga eseleni. Noma abantu babeqhubeka nezenzo zobugebengu kulendawo kodwa izinga lehla kakhulu. Kukhona nalapho umuntu wayeshawa kwenzeke aze afe kwasekuqanjwa lendawo kanjalo. Esikhathini sanamuhla lamakomidi awasekho futhi akukho emthethweni ukushawa komuntu ngoba amaphoyisa ayambopha nalowo oshayile kanye naso isigebengu.